श्रावण २५, २०७६ गोकर्ण गौतम
विदेशी फिल्म आइतबारमात्र ल्याउने कुरा पनि सुनिन्छ । यसमा के बेफाइदा छ ? विदेशी फिल्म चल्न रोक लगाउने कि आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक र गुणात्मक क्षमता बढाउने ?
हामीले स्वदेशी फिल्मको संरक्षणमात्र गर्न खोज्या कि अझ विस्तार गर्न खोजेको ? यी कुरामा पहिले स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिलेजस्तो फिल्म बनिरहेको र चलिरहेको छ, त्यसैलाई संरक्षण दिने मात्र भनेको हो भने विधेयक जे ल्याए पनि मतलब छैन । यसले हलवालालाई दुःख दिन्छ, घाटा लगाउँछ तर नेपाली फिल्मलाई माथि पुर्‍याउँदैन । शुक्रबार र शनिबार नेपाली फिल्म नचलाएको कुनै हप्ता छैन अहिले पनि । ‘सो’ धेरै वा आइतबार, शनिबार पाएर मात्र फिल्म चल्दैनन् भन्ने प्रशस्त उदाहरण छन् ।
तपाईं नेपाली र हिन्दी फिल्म वितरण गर्नुहुन्छ । तपाईंजस्तैले नेपालीलाई ढाल बनाएर हिन्दीको व्यापार गर्छन् भन्ने आरोप छ नि ?
विदेशीलाई काखी च्यापेर स्वदेशी फिल्म पाखा लगाउने गिरोह नै छ भन्ने आरोप नि ?